Abasebenzi Abalungele Ama-Bachelor Degrees »IHodges University - Admissions
Categories: Amaqiniso Nje
Khetha iHodges University yohlelo lwakho lweBachelor's Degree Program
Izinhlelo zethu zeziqu zeBachelor zeziqu zikunikeza ulwazi oluhlukile kwezemfundo olususelwa kwikharikhulamu eqhutshwa ngabasebenzi. Kungakhathaliseki ukuthi uku-intanethi, kwi-campus, egumbini lakho lokuphumula, noma phakathi nendawo emhlabeni jikelele, sinohlelo lokulingana nezimo zakho.
Sebenza ezweni eligcwele inombolo ngeDegree ku-Accounting.
I-Flexible Applied Psychology Degree ilungele noma yimuphi umsebenzi.
Yiba ngumshayeli wendiza nge-BS yethu ezifundweni ezibandakanya imikhakha yezindiza
Khetha iHodges BSN ukuthuthukisa amakhono onesi owadingayo ukuze uphumelele ukuqala ngosuku lokuqala
Thola Isiqu Sakho Sokuphatha Ibhizinisi Esikoleni Esiphezulu Sebhizinisi.
IComputer Science vs Computer Information Technology
Qalisa Ikusasa Lezobuchwepheshe ngama-Progressive Computer Science Degrees
Thatha umsebenzi othakazelisayo oneziqu zeCriminal Justice.
Idizayini Yedijithali Nezithombe
Sebenzisa amakhono akho okudala nawobuciko ngezinga elithile ku-Digital Design and Graphics.
Ezezimali - Ukubhalisela i-Fall 2021!
Zilungiselele ikusasa elifanele ukutshalwa kwemali nge-BS kwezezimali.
Izinhlelo zeSayensi Yezempilo
Thola amakhono nokuqeqeshwa ukugxila ekunakekelweni kweziguli nasekucwaningeni.
Funda ukusebenzisa amakhono nokuphatha ukuze abasebenzi bakwazi ukugxila kokubaluleke ngempela - impilo yesiguli.
Izifundo ezingekho emthethweni
Khetha itshe elihle lokunyathela ezinhlelweni zakho zesikhathi esizayo, noma yini abangaba nayo nge-Interdisciplinary Studies degree.
Thola Ukuqeqeshwa Okuwina Umklomelo Womsebenzi Womthetho kanye Nezomthetho.
Izinga Eliphezulu NgeDegree Yezokuphatha.
Funda izindlela ezisebenzayo zokumaketha ezikubeka phambili komncintiswano.